Ahoana ny fomba hanesorana ny feo avy amin'ny horonantsary YouTube nefa tsy mampiasa programa na fomba kely | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba hanesorana ny feo avy amin'ny horonantsary YouTube nefa tsy mampiasa programa na fomba tsotra
Izay rehetra tia mozika dia manana loharano YouTube tsy manam-petra hankafizany mandritra ny andro maro ireo kaonseritra mivantana samihafa izay apetraky ny mpampiasa maro. Ny iray amin'ireo olana hitako tamin'ny fotoana maro dia ny fahafahako mihaino an'io kaonseritra io, tsy mihaino afa-tsy ny mozika, amin'ny MP3 na amin'ny finday avo lenta tsy ilako ilay horonan-tsary.
Fotoana lasa izay dia nanazava izahay ny fomba fampidinana ny horonantsary YouTube amin'ny fomba tsotra noho ny fitaovana OffLiberty, fa anio amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity dia hanazava ihany koa izahay ny fomba hanovana ny horonantsary YouTube ho MP3 nefa tsy mampiasa programa ary tsy misy fahasarotana ho an'ny mpampiasa rehetra.
Tsy lazaina intsony fa miaraka amin'ity fampianarana ity dia hahafahanao mamoaka ny raki-peo avy amin'ireo kaonseritra marobe hita ao amin'ny serivisy horonantsary Google, fa koa amin'ny horonan-tsary tianao na manintona ny sainao. Azo antoka fa fomba tsara ianarana izany ny fomba fampidinana mozika.
1 Safidio ny horonan-tsary tianao hakana ny audio
2 Ity tranonkala ity sy ny maro hafa dia mamela anao hamoaka ilay audio
3 Ampidiro ny rohy ary afaka segondra vitsy dia azonao atao ny misintona ny audio
Safidio ny horonan-tsary tianao hakana ny audio
Voalohany indrindra tsy maintsy misafidy ilay horonan-tsary tiana hakana ny audio izahay, izay tsy maintsy ampahibemaso ary ho hita amin'ny Internet ao amin'ny YouTube. Raha nisy nanao ilay horonan-tsary tsiambaratelo, tokony ho takatr'izy ireo fa tsy tiany ho hitan'ny rehetra izany, mainka fa ny olona iray misintona azy na mamoaka ilay feo.
Raha hamoaka ilay audio ianao na hanary ilay horonan-tsary hampiasa azy ohatra ny feon'ny horonantsary hafa dia mitandrema tsara satria raha te-hanao izany dia tsy maintsy tsy misy zon'ny mpamorona ny horonantsary.
Raha vantany vao nifantina ny horonan-tsary izahay dia te-haka ny audio Tsy maintsy maka tahaka ny URL hita eo an-tampon'ny efijery amin'ny ankamaroan'ny mpizaha tranonkala izahay, araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony.
Ity tranonkala ity sy ny maro hafa dia mamela anao hamoaka ilay audio
Rehefa mandeha ny fotoana, pejy web marobe no niseho tamin'ny tambajotram-pifandraisana, ahafahantsika mamoaka ny feo avy amin'ny horonantsary YouTube amin'ny alàlan'ny fampidirana ny URL amin'ny toerana mifanitsy aminy.
Hiresaka momba an'ity lahatsoratra ity isika Youtube mp3 izay raha ny hevitray dia ny azo antoka indrindra amin'ny isan'ny misy Ary izany ao anatin'ny segondra vitsy, amin'ny fomba tena tsotra, dia ho afaka hamoaka ilay audio avy amin'ilay horonantsary nofidianay izahay. Ilaina ihany koa ny mitadidy ao an-tsaina foana fa azo ampiasaina maimaim-poana, zavatra izay tsy mitranga amin'ny tranga rehetra.
Ohatra fotsiny io, fa raha mampiasa Google ianao dia hahita pejy an-jatony izay hamela anao hanao toy ny youtube-mp3, na dia amin'ny fomba feno kokoa aza, saingy tsy dia atokisana noho ilay asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity.
Ampidiro ny rohy ary afaka segondra vitsy dia azonao atao ny misintona ny audio
Ny tranonkala izay nanapahanay hevitra hampiasaina hanovozana ny feo avy amin'ny horonantsary YouTube voafantina dia tsotra dia tsotra ary tsy handany vola na inona na inona ianao hahazoana izany, fa raha sanatria ka hanome antsipirihany ny torolàlana momba ny tokony hataonao izahay
Voalohany indrindra ampidiro ao amin'ny habaka voatokana ho azy eo an-tampon'ny pejin-tranonkala ny rohy an'ilay horonantsary voafantina. Tsindrio avy eo "Mihodina" ary afaka segondra vitsy dia ho azonao atao ny misintona ny feon'ilay horonantsary, aorian'ny fisehoan'ny hafatra "Lahatsary niova fo soa aman-tsara".
Raha misintona ny audio dia tsindrio fotsiny ny "Download" ary raha vantany vao vita ny dingana dia ho azonao atao amin'ny solosainao.
Mora ny misintona horonantsary YouTube ary tsy mora koa ny manaisotra ny audio amin'ireo iray amin'ireto horonantsary ireto, ohatra, mankafy ny kaonseritra amin'ny fotoana sy toerana tsy misy fidirana amin'ny tamba-jotra na tsy mila milalao ilay video amin'ny fitaovana rehetra. .
Nahavita namoaka ny feo avy amin'ny horonantsary YouTube ve ianao?. Lazao anay ny nanjo ny zavatra niainanao teny amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na tamin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay. Lazao anay ihany koa raha mahafantatra fitaovana hafa ianao hanalana audio amin'ny horonan-tsary izay ampiasainao matetika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ahoana ny fomba hanesorana ny feo avy amin'ny horonantsary YouTube nefa tsy mampiasa programa na fomba tsotra
Huawei's Kirin 960 processeur dia te-hanana toerana ho azy eo amin'ireo lehibe
Amin'ny 21 Oktobra, Samsung dia hanolotra ny Galaxy C9 miaraka amin'ny RAM 6 GB